Ukutshaja ngaphandle kwamacingo, itshaja engenazingcingo, iMouse Mat-Sheerfond
Elungiselelweyo intlawulo smart engenazingcingoIngcali yeMveliso
I-Dongguan Sheerfond New Material Co, Ltd ijolise kuphuhliso kunye nemveliso yeemveliso ezintsha. Ezona mveliso ziphambili zizinto zegraphene kunye neemveliso zesicelo, iiofisi kunye neemveliso zasekhaya, kunye nezipho. Injongo yethu "iteknoloji yobomi". Izinto eziluncedo kuthi: Ukuphuculwa kobuchule bemveliso: ukusuka kuphuhliso lwezinto ezibonakalayo, uyilo lwembonakalo, uyilo lweendlela, ukukhula komngundo, uyilo lweemveliso kunye nophuhliso, jika izimvo zakho zibe yimveliso elungileyo kwaye ufeze amaphupha akho.
Guqula izimvo zakho zibe yimveliso elungileyo kwaye uqaphele amaphupha akho.
Esi sisikhafu sokufudumeza. Izixhobo zayo zokuFudumeza ziishiti ze-graphene ezenziwe yi-sheerfond. Igraphe ...
Le yimaski yokufudumeza graphene. Le mveliso ikakhulu ukuze kupheliswe ukudinwa iliso kunye nokukhuthaza bl ...
Le yimveliso yesikhumba, indawo yokuma ephathekayo kunye nesiphatho esiphathwayo, ngetshaja engenazingcingo, ...
Iiparamitha zemveliso zezi zilandelayo: Imodeli No. QB001 Isiphumo 5V2A Igalelo 5V 2A umthamo ...
Iiparamitha zemveliso zezi zilandelayo: Imodeli yeNombolo TL02 ye-LED yombala we-RGB yokufaka i-9V1.5A / 5V2A ...
Imveliso yeparameter yeModeli No. X-2 Isiphumo 5V 2A Igalelo i-AC90-240V ye-LED yombala oMhlophe oPrintwayo ...
Imodeli No. A5-1 Isiphumo 5V2A Igalelo 5V 2A umthamo 4000mAh / 5000mAh / 6000mAh / 8000mAh / 10000mAh ...
Ukuhlala kwiofisi ecocekileyo, kwidesika yakho, kukho umnini wepeni olungileyo, onokugcina ...
Le mveliso incinci ngobukhulu, inemisebenzi emininzi, iqulethe izinto ze-elektroniki, ezineselfowuni ...
Le mveliso iyimveliso yelungelo elilodwa lomenzi, kunye nomsebenzi wokugcina kunye nomsebenzi wokutshaja ngaphandle kwamacingo we-multi-f ...
Kwidesktop yakho ecocekileyo, iphedi entle yemouse, ngaxeshanye ngumnini wepeni kunye nepho ...
Ngemisebenzi yeshishini exakekileyo kunye nophuhliso lweemveliso ze-elektroniki, kufuneka sizise ...
Singayenza loo nto
Singayikhusela indawo egqunywe nguwe, kwaye sivumele kuphela ukuba uthengise iimveliso zethu kule ndawo
Sitshele izimvo zakho kunye neemfuno zakho. Sisebenzisa ubuchule bethu kuyilo, uphuhliso, isikhunta, i-elektroniki kunye nemveliso ukuphuhlisa izimvo zakho kwiimveliso ezilungileyo, kunye nokunikezela ngeemveliso ezininzi ezikhulu ngexesha.
Kwimveliso esinokuyivelisa ngobuninzi, ngokweemfuno zakho, uyile umxholo owufunayo kwimveliso nakupakisho, kwaye ukhawuleze ukuhlangabezana neemfuno zakho zemveliso.
Ukuthintela ukhuphiswano olubi kwimarike, sisebenza kunye ukukhusela imarike, ukwahlulwa kwabasebenzi kunye nentsebenziswano, senza umsebenzi olungileyo kuphuhliso lwemveliso nakwimveliso, wenza umsebenzi olungileyo kwintengiso kunye nokukhuthaza imveliso.
sheerfond uthatha inxaxheba kumboniso wezipho ka-2021
Umfanekiso 1. umfanekiso 1 Ukujonga ezantsi kumboniso wezipho ka-2021 Njengomvelisi kunye nomzi mveliso we-OEM wezipho kunye neemveliso zoyilo, sithathe inxaxheba kumboniso wesipho owawubanjwe ngomhla wama-25 ukuya kowama-28, 2021. Umboniso wasekwa eShenzhen, China. Kumboniso, sadibana nabathengi abaninzi abadala nabatsha. Kakhulu ...
Kwenzeka ntoni nge-iPhone12 MagSafe yokutshaja ngaphandle kwamacingo ukusukela nge-iPhone 8 ngo-2017, u-Apple wongeze umsebenzi wokutshaja ngaphandle kwamacingo kuzo zonke iimodeli ze-iPhone, ezifanayo nendlela yokutshaja engenazingcingo kwezinye iifowuni eziphathwayo, kwaye iqala ukutshaja xa ibekwe kwicingo ...
Silandela umgaqo wabathengi kuqala kuwo onke amanyathelo
SINIKE I-imeyile yakho kwaye uya kuhlala uhlaziywa mihla yonke NGEZENZAKALO ZAMVA, KWINKCUKACHA!
Sinokukunika iisampulu kunye nolwazi oluthe kratya